Windows XP ကို​​အသုံးပြုသူများနှင့်လာဘ်ထိုး $100 Windows ကိုချွတ် 8 ထုတ်ကုန် - သတင်း Rule
Windows XP ကို​​အသုံးပြုသူများနှင့်လာဘ်ထိုး $100 Windows ကိုချွတ် 8 ထုတ်ကုန်
အသစ်များစက်တွေကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန် XP ကို​​အသုံးပြုသူများကကြိုးစားစည်းရုံးဖို့နောက်ဆုံးအကူအညီလိုအပ်နေအတိုင်း, Microsoft ကကမ်းလှမ်းသည် ဖောက်သည်များ $100 အချို့သော Windows ကိုချွတ် 8 ထုတ်ကုန်သူတို့စတိုးဆိုင်၌မိမိတို့ XP ကို​​ကွန်ပျူတာကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်.
အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည်အထိပြေး 15 ဇွန်လ, နှင့်အမေရိကန်အနှံ့လက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက်ရရှိနိုင်, ကနေဒါနှင့် Puerto Rico. “ကမ်းလှမ်းမှုကိုအွန်လိုင်းဝယ်ယူပါစေသောသူဖောက်သည်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်(s ကို) တစ်ဦးခြေစစ်ပွဲကို Windows XP စက်ကိရိယာနှင့်, သို့မဟုတ်ဝယ်ယူစဉ်ခြေစစ်ပွဲကို Windows XP စက်ကိုတင်ပြဖောက်သည်သူအ(s ကို) In-store ကိုသာ,” အ Redmond ကုမ္ပဏီကရှင်းပြသည်.
Microsoft ကအွန်လိုင်းရရှိမှုဖော်ပြထားပေမယ့်, သင်တစ်ဦးစတိုးဆိုင်ထဲသို့ယူပြီးမပါဘဲဝဘ်ကျော်သင်တစ်ဦးက Windows XP ကို​​စက်ရှိသက်သေပြနိုင်ပုံကိုမူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးရဲ့.
အဆိုပါ $100 လျှော့စျေးအနည်းဆုံးကုန်ကျအသစ် devices တွေကိုဆန့်ကျင်မှသာရရှိနိုင် $599, နှင့် Surface tablet များတွင်အနုတ်အ Surface ကလည်းပါဝင်သည် 2. Microsoft က HP က Envy Touchsmart မီးမောင်းထိုးပြ 15 touchscreen က Laptop နဲ့သဘောတူညီချက်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီထုတ်ကုန်၏နှစ်ခုအဖြစ် Lenovo က ThinkPad S1 ယောဂ touchscreen ကလက်တော့ / tablet ကိုဟိုက်ဘရစ်.
Microsoft ကသိသာအားလုံးအခြားသူများကိုပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည့်နေရာတွင် XP ကို​​သေ-Hard ဆွဲဆောင်ရန်ဤသဘောတူညီချက်၏တန်ခိုးအတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဖောက်သည်တစ် device ကိုအသီးအသီးမှကန့်သတ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပေးရဲ့အဖြစ်.
Microsoft က၎င်း၏ 12 နှစ်အရွယ် operating system အတွက်အားလုံးထောက်ခံမှုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မည် 8 ဧပြီလ. အဆိုပါကုမ္ပဏီပြီးသားအသစ်များက Windows ပလက်ဖောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမည်ကဲ့သို့မလုံခြုံ XP ကို​​သတိပေးခဲ့သည်, နဲ့ HP တူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြိုးစားကြည့်ပါနဲ့အားပေးဖို့ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်ကြပြီ.
ဒီအားထုတ်မှုနေသော်လည်း, XP ကို​​ဆဲကျယ်ပြန့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးအသုံးပြုသည်, နှင့်ရှင်းလင်းစွာအသုံးပို့စ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိဦးမည် 8 ဧပြီလ. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, Windows XP ကို​​အသုံးပြုသူများနှင့်လာဘ်ထိုး $100 Windows ကိုချွတ် 8 ထုတ်ကုန်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
20593	0 ကနေဒါ, Inquirer, Microsoft က, Microsoft က Surface က, Microsoft Windows နဲ့, Puerto Rico, Windows ကို 8, Windows XP ကို
← နောက်ကျောပထမဦးဆုံးတရားရေးလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့သည်အဖြစ်အပေါ် MH370 ရှာဖွေရေး အမေရိကန်ရေနံစျေးနှုန်းတွေသော့ချက်အချက်အချာမှာတင်းကျပ်ထောက်ပံ့ရေးအပေါ်မြင့်တက်လာ →